आफ्ना मान्छेको गोप्य कुरा हेर्नु मन छ ? अब मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा यसरी गोप्य च्याट (भिडिओ) — newsparda.com
आफ्ना मान्छेको गोप्य कुरा हेर्नु मन छ ? अब मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा यसरी गोप्य च्याट (भिडिओ)
तपाईंहरूलाई थाहा छ? फेसबुक मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा हामीले ‘सिक्रेट मेसेज’ पठाउन वा गोप्य रूपमा च्याट गर्न सक्छौं। र यसका लागि अर्को कुनै नयाँ एपको आवश्यकता पनि पर्दैन।
यो सुविधा मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममै सिक्रेट मेसेज भनेर उपलब्ध हुन्छ।यसबाट तपाईंले आफ्ना साथीहरूलाई गोप्य रूपमा सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो मेसेज मेसेज बक्समा सधैं रही पनि रहँदैन। तर यसका लागि तपाईंले केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि स्क्रिनको दायाँपट्टी माथिल्लो भागमा फोन कल, भिडिओ कललगायत अप्सनहरू देखिन्छ। सबैभन्दा कुनामा रहेको ‘आई’ जस्तो आइकन थिच्नुपर्छ। यहाँ ‘गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन’ भन्ने अप्सन देखिन्छ। त्यो अप्सन थिचेपछि अब सिक्रेट च्याट गर्न सकिन्छ।
टाइमर सेट गर्न बिर्सनुभयो भने पनि केही छैन। त्यो सिक्रेट च्याट लिस्टमा बसिरहन्छ। पछि डिलिट च्याट गर्न सकिन्छ।यसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यदि हामी मोबाइलबाट सिक्रेट च्याट गर्दैछौं भने त्यो ल्यापटपको मेसेज बक्समा देखिन्न। ग्रुपमा भने सिक्रेट च्याट गर्न मिल्दैन।मेसेन्जरको सिक्रेट च्याटको स्क्रिनसट लिएर राख्न भने सकिन्छ। र स्क्रिनसट लिएको कुरा अर्को मान्छेले थाहा पाउँदैन।